I-china abakhiqizi bempompo ye-MZF Magnetic Drive Pump nabaphakeli | damei kingmech futha
Usayizi: DN25 ~ DN400
Amandla: ~ 2000m3 / h
Ikhanda: ~ 250mUkushisa: ngaphansi kuka-250 ℃
Ingcindezi: 2.5MPa ~ 10MPa
Amandla: ~ 560kW
1.Single esiteji ukuncela olulodwa, ngaphezuluung isakhiwo
2.MZF futha kazibuthe uhlobo futha centrifugal ukuthi kungekho uphawu shaft, ngokuphelele ngaphandle ukuvuza, futhi eliqhutshwa coupling kazibuthe, futhi basonta ilungu lomndeni kazibuthe enophephela.
Isebenzisa ukujikeleza kwangaphakathi kokuphakathi ukugcoba nokupholisa ukuhlangana kukazibuthe nokuhambisa okushelelayo. Ukusakazwa kwangaphakathi kufaka ukucindezelwa okuphezulu ukusakazwa kwangaphakathi nokusakazwa kwengcindezi ephansi. Iphampu yokusabalalisa yangaphakathi enomfutho ophakeme ilungele okuphakathi okulula ukwenziwa vaporization, ingcindezi ephansi yokusakazwa kwempompo ilungele okulingene okungekho easy okwe-vaporization.
Izimpompo zamanzi eziyingozi zizohlonywa ngokuphindwe kabili okuqukethe igobolondo, Kuzoba ne-alamu lapho igobolondo lokuqala lokuqukethwe lilingisa.
5.Ijazi lokushisa nebhantshi lokupholisa lingasetshenziswa ngokuya ngesimo sokusebenza.
7.During working, the axial pump's axial force balances ngokuzenzekelayo ngamandla wokubacindezela, thrust disc only bear the instant axial thrust when the pump start and stop.
Impompo kazibuthe ingakufinyelela lokho ngaphandle kokuvuza, kufanelekile ukudlulisa okonakalisayo, okunobuthi, okusha, okuqhumayo, okubizayo noma okulula kokwenza igesi. Ngaphezu kwalokho, ipompo kazibuthe nayo ilungele ukuhambisa ukushisa okuphezulu, uketshezi oluphansi lokushisa kanye noketshezi ngaphansi kwesimo se-vacuum.
Langaphambilini I-API610VS6 Pump TDY Model
Olandelayo: IMPOMO YAMI Magnetic Driven